Documentary – Alpha Premium
The Rescue (2021) ##unicode ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်လောက်တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဘောလုံးအသင်းကကောင်လေး ၁၂ ယောက်ထမ်လွမ်ဂူထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အက်စီးဒင့်အကြောင်းကိုအားလုံးလည်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်လောက်တုန်းကကယ်ဆယ်ရေးအတွက်နိုင်ငံအနှံ့အပြားကလည်းကူညီပေးခဲ့ကြရပြီး အရမ်းကိုခက်ခဲအန္တရယ်များတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ The Rescue ဆိုတဲ့ Documentary Film ထဲမှာဆိုရင်လှိုဏ်ဂူထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ကလေးတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲကယ်တင်ခဲ့ရပုံ ကယ်ဆယ်ရေးအတွင်းအခက်အခဲအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရပုံတို့ကို အသေးစိတ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာကို ကြည့်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ် မိုးတွေကြီးပြီးလှိုဏ်ဂူအတွင်းထဲမှာရေတွေတက်လာတဲ့အတွက်လှိုဏ်ဂူတွင်းရေငုပ်သမားတွေအတွက်တောင် အလွန်တရာခက်ခဲခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့တာပါ ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေလက်တွဲညီညီနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်လို့ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေလာက္တုန္းကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေဘာလုံးအသင္းကေကာင္ေလး ၁၂ ေယာက္ထမ္လြမ္ဂူထဲမွာပိတ္မိေနတဲ့အက္စီးဒင့္အေၾကာင္းကိုအားလုံးလည္းသိၾကမယ္ထင္ပါတယ္ အဲ့ဒီအခ်ိန္ေလာက္တုန္းကကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားကလည္းကူညီေပးခဲ့ၾကရၿပီး အရမ္းကိုခက္ခဲအႏၲရယ္မ်ားတဲ့ကယ္ဆယ္ေရးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့တာပါ The Rescue ဆိုတဲ့ Documentary Film ထဲမွာဆိုရင္လႈိဏ္ဂူထဲမွာပိတ္မိေနတဲ့ကေလးေတြကိုခက္ခက္ခဲခဲကယ္တင္ခဲ့ရပုံ ကယ္ဆယ္ေရးအတြင္းအခက္အခဲအႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ႀကဳံေတြ႕ရပုံတို႔ကို အေသးစိတ္႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားတာကို ၾကည့္ရႈၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္ မိုးေတြႀကီးၿပီးလႈိဏ္ဂူအတြင္းထဲမွာေရေတြတက္လာတဲ့အတြက္လႈိဏ္ဂူတြင္းေရငုပ္သမားေတြအတြက္ေတာင္ အလြန္တရာခက္ခဲခဲ့တဲ့အေျခအေနျဖစ္ခဲ့တာပါ ကယ္ဆယ္ေရးသမားေတြ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြလက္တြဲညီညီနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးေအာင္ျမင္ေအာင္ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကလဲဆိုတာကိုအေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရမွာျဖစ္လို႔ ၾကည့္ရႈအားေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 1080p WEB-DL,720p WEB-DL Genre : Documentary Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow
IMDB: 8.3/10 680 votes
The Choice (2021) (App member only) ##umicode The Choice ဇာတ်ကားမှာတော့ Marsiဟာ Sinaiက တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာ စစ်ဆင်ရေးကိုအမြဲအောင်မြင်ပြီးဆုံးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ တပ်ဖွဲ့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်နေ့မှာတော့ သူ့တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ တပ်စခန်းတွေ လိုက်လံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့မှာ အရင်က သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Hassemပါဝင်နေကြောင်းကိုသိရှိခဲ့ရတယ်။ စစ်သားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Hassemဟာ အခုတော့ ISISအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ Marsiနှိမ်နင်းရမဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တုန်းက အတူတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်နှစ်ယောက်ဟာ အခုတော့ရန်သူတွေဖြစ်လာကာ အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားရတော့တယ်။စစ်ဆင်ရေးတိုင်းကို အောင်မြင်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်Marsiတစ်ယောက် အန္တရာယ်များတဲ့နယ်မြေမှာ သသူ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ဘယ်လိုအသက်ပေးကာကွယ်မယ်ဆိုတာကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi The Choice ဇာတ္ကားမွာေတာ့ Marsiဟာ Sinaiက တပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕တပ္ဖြဲ႕ဟာ စစ္ဆင္ေရးကိုအၿမဲေအာင္ျမင္ၿပီးဆုံးေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ တပ္ဖြဲ႕ဘဲျဖစ္ပါတယ္။တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူ႔တို႔တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ တပ္စခန္းေတြ လိုက္လံတိုက္ခိုက္ေနတဲ့အဖြဲ႕မွာ အရင္က သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ Hassemပါ၀င္ေနေၾကာင္းကိုသိရွိခဲ့ရတယ္။ စစ္သားတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့တဲ့ Hassemဟာ အခုေတာ့ ISISအဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ Marsiႏွိမ္နင္းရမဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက အတူတူတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ရဲေဘာ္ရဲဘက္ႏွစ္ေယာက္ဟာ အခုေတာ့ရန္သူေတြျဖစ္လာကာ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ဖို႔ႀကိဳးစားရေတာ့တယ္။စစ္ဆင္ေရးတိုင္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္Marsiတစ္ေယာက္ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့နယ္ေျမမွာ သသူ႔တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကို ဘယ္လိုအသက္ေပးကာကြယ္မယ္ဆိုတာကို ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 2GB Format…mp4 Quality :720p HD Genre : Action.Crime,War Subtitle : ...
IMDB: 6.4/10 27489 votes
The Choice (2021)
Untold: Malice at the Palace ##unicode Untold: Malice at the palaceဇာတ်ကားဟာ Netflixကရိုက်ကူးထားတဲ့ sport documentaryတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Malice at the palaceဆိုတဲ့ ၂၀၀၄ နိုဝင်ဘာ၁၉ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ NBA ဘတ်စကတ်ဘောကစားပွဲ မတော်မဆမှုအကြောင်းကို အားကစားပရိသတ်တိုင်း သိကြမှာပါ။Indiana Pacers အဖွဲ့နဲ့ Detorit Pistonsအဖွဲ့ကြားက ချန်ပီယံဆုလုတဲ့ ပြိုင်ပွဲဟာ ပရိသတ်တွေနဲ့ ကစားသမားတွေရဲ့ ရန်ပွဲတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နေ့က ဖြစ်စဉ်ဟာ NBA သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ နာမည်ကြီးရန်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ Netflixက ဒီကစားပွဲမှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေနဲ့Indiana Pacers အဖွဲ့ ကစားသမားတွေကိုပါ အင်တာဗျူးထားတာတွေကို Documentaryတစ်ခုအဖြစ်ရိုက်ကူးထားတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ကစားသမားမှ မပြောချင်ကြတဲ့ NBA ကစားပွဲတစ်ပွဲအကြောင်းကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Untold: Malice at the palaceဇာတ္ကားဟာ Netflixက႐ိုက္ကူးထားတဲ့ sport documentaryတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ Malice at the palaceဆိုတဲ့ ၂၀၀၄ ႏို၀င္ဘာ၁၉ရက္ေန႔မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ NBA ဘတ္စကတ္ေဘာကစားပြဲ မေတာ္မဆမႈအေၾကာင္းကို အားကစားပရိသတ္တိုင္း သိၾကမွာပါ။Indiana Pacers အဖြဲ႕နဲ႔ Detorit Pistonsအဖြဲ႕ၾကားက ခ်န္ပီယံဆုလုတဲ့ ...
IMDB: 7.6/10 1.5k votes
Cartel Land (2015) Cartel Land Documentaryကတော့ အမေရိကန် Filmmaker Matthew Heinemanရဲ့ အမေရိကန်နဲ့ မက္ကဆီကိုနယ်စပ်ကြားက မူးယစ်ဆေးတင်ပို့မှုပြသာနာများအေကြာင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မက္ကဆီကို Michoacanပြည်နယ်မှာ မူးယစ်ဂိုဏ်းတွေရဲ့ ၁၂နှစ်ကြာ ပြည်သူတွေကို အနိုင်ကျင့်ညှင်းပန်းမှုအပေါ် အစိုးရကလဲ အရေးယူပေးခြင်းမရှိတဲ့အတွက် Michoacanပြည်နယ်က ‌ဒေါက်တာJose Manuel Mirelesဦးဆောင်တဲ့ မြို့သားတစ်စုက လက်နက်ကိုင်ကာ ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းအဖွဲ့အစည်းတွေကို သုတ်သင်ခဲ့တယ်။ အနိုင်ကျင့်ခံရတာကို မခံစားနိုင်တော့ ပြည်သူတွေဟာဒေါက်တာJose Manuel Mirelesဦးဆောင်တဲ့ Autodefensaအဖွဲ့အစည်းထဲ ဝင်ရောက်လာကြပြီး ကိုယ့်မြို့ကိုယ်ကာကွယ်ခဲ့တဲ့အတွက် အဖွဲ့အစည်းက တစ်ဖြေးဖြေး အင်အားကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ‌အင်အားကြီး အောင်မြင်မှုက အစိုးရအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါ မက္ကဆီကိုသမ္မတက ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဖြိုခွဲဖို့နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ မူးယစ်ဂိုဏ်းတွေကို သုတ်သင်ဖို့ ပြည်သူတွေ လက်နက်ကိုင်ပြီးဘယ်လိုခုခံခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဒီ documentaryမှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
IMDB: 7.4/10 17,984 votes
The Hidden Kingdoms of China (2020) ##unicode တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြေဧရိယာကြီးမာကျယ်ပြန့်လှတာနဲ့အညီ မတူညီတဲ့သဘာဝနဲ့ တောတောင်မြေရိုင်းတွေကလည်း ပေါများလှပါတယ်။ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ တရုတ်နယ်မြေတွေမှာ ရှင်သန်ကျက်စားနေကြတဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ တိရစ္ဆာန်ပေါင်းစုံလည်းရှိကြပါတယ်။ ဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ပုံစံ၊ သဘာဝ၊ အမူအကျင့်၊ ဇာတ်လမ်းတွေကို တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ ဒီ Documentary ကို ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအုံး။ ##zawgyi တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ေျမဧရိယာႀကီးမာက်ယ္ျပန႔္လွတာနဲ႔အညီ မတူညီတဲ့သဘာဝနဲ႔ ေတာေတာင္ေျမ႐ိုင္းေတြကလည္း ေပါမ်ားလွပါတယ္။ ပုန္းကြယ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္နယ္ေျမေတြမွာ ရွင္သန္က်က္စားေနၾကတဲ့ မတူကြဲျပားတဲ့ တိရစာၦန္ေပါင္းစုံလည္းရွိၾကပါတယ္။ ဒီတိရစာၦန္ေလးေတြရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ပုံစံ၊ သဘာဝ၊ အမူအက်င့္၊ ဇာတ္လမ္းေတြကို တင္ဆက္ေပးထားတဲ့ ဒီ Documentary ကို ႀကည့္ရႈအားေပးႀကပါအံုး။ Review – Yue Liang File Size – 1GB,2GGB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Genre : Documentary Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Yue Liang Encoded by Arrow
Joshua: Teenager vs. Superpower (2017) ##unicode Joshua Wangဆိုတဲ့ နာမည်ကို နွေဦးတော်လှန်ရေး ဆင်နွဲနေတဲ့သူတိုင်း ရင်နှီးနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Joshua Wangဟာတရုတ်သမ္မတ Xi Jinping အကြောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဟောင်ကောင်လူငယ်တတ်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ယောက်ဘဲဖြစ်တယ်။ Joshua Wangက အသက် ၁၄နှစ်နဲ့ Scholarism အဖွဲ့ကို အထက်တန်းကျောင်းသား ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ ပထမဆုံး လှုပ်ရှားမှုကတော့ ဟောင်ကောင်ကျောင်းတွေမှာ အမျိုးသားပညာရေးစနစ်ပြဌာန်းမှာကို ရုတ်သိမ်းဖို့ဘဲဖြစ်တယ်။Joshua Wangကလူငယ်ကျောင်းသားတွေကို စုစည်းကာအစိုးရပိုင်ရင်ပြင်တွေကိုသိမ်းပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြပြီး အစိုးရကိုဖိအားပေးကာ အမျိုးသားပညာရေးစနစ်ကို ရုတ်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေနဲ့ဘဲ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့Scholarismအဖွဲ့ကတရုတ်အစိုးရရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲဖြိုခွင်းမှုတွေကို ဘယ်လိုတောင့်ခံခဲ့သလဲ။တရုတ်အစိုးရကို ဘယ်လိုဖိအားပေးခဲ့လဲဆိုတာကို ဒီ documentary မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ##zawgyi Joshua Wangဆိုတဲ့ နာမည္ကို ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏြဲေနတဲ့သူတိုင္း ရင္ႏွီးေနမယ္လို့ထင္ပါတယ္။ Joshua Wangဟာတ႐ုတ္သမၼတ Xi Jinping အေၾကာက္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ေဟာင္ေကာင္လူငယ္တတ္ႂကြလွုပ္ရွားသူတစ္ေယာက္ဘဲျဖစ္တယ္။ Joshua Wangက အသက္ ၁၄ႏွစ္နဲ႔ Scholarism အဖြဲ႕ကို အထက္တန္းေက်ာင္းသား ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြနဲ႔တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ သူတို့အဖြဲ႕ရဲ့ ပထမဆုံး လွုပ္ရွားမွုကေတာ့ ေဟာင္ေကာင္ေက်ာင္းေတြမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ျပဌာန္းမွာကို ႐ုတ္သိမ္းဖို့ဘဲျဖစ္တယ္။Joshua Wangကလူငယ္ေက်ာင္းသားေတြကို စုစည္းကာအစိုးရပိုင္ရင္ျပင္ေတြကိုသိမ္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပၿပီး အစိုးရကိုဖိအားေပးကာ အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ကို ႐ုတ္သိမ္းဖို့ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးေတြနဲ႔ဘဲ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့Scholarismအဖြဲ႕ကတ႐ုတ္အစိုးရရဲ့ ဆႏၵျပပြဲၿဖိဳခြင္းမွုေတြကို ဘယ္လိုေတာင့္ခံခဲ့သလဲ။တ႐ုတ္အစိုးရကို ဘယ္လိုဖိအားေပးခဲ့လဲဆိုတာကို ဒီ documentary ...
IMDB: 7.1/10 1,310 votes
Burma VJ: Reporting fromaClosed Country (2008) ##unicode Burma VJ:Reporting From A closed Country documentary ကိုတော့ လက်ရှိတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတိုင်း ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ခုနစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အကြောင်းကို DVBက သတင်းထောက်တစ်ယောက်က Documentary အနေနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကို မခံနိုင်တဲ့မြန်မာလူထုကြီးက ရန်ကုန်လမ်းမတွေပေါ်မှာထွက်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုန်းကြီးပေါင်းများစွာက ဒီဆန္ဒပြပွဲကို ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။သတင်းလွှတ်လပ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားတဲ့စစ်အစိုးရက ကင်မရာကိုင်ထားတဲ့ လူမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့် သတင်းထောက်တွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကို နိုင်ငံတကာကို တင်ပြနိုင်ဖို့အတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ဒီကာလတွေမှာ စစ်အစိုးရရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲကို ဘယ်လိုရက်ရက်စက်စက် ဖြိုခွင်းခဲ့လဲ။ လူထုအနေနဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ခဲ့သလဲ။ သတင်းထောက်တွေအနေနဲ့ရော သတင်းတွေဘယ်လိုရိုက်ကူးခဲ့သလိုဆိုတာတွေကို ဒီ documentary မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ##zawgyi Burma VJ:Reporting From A closed Country documentary ကိုေတာ့ လက္ရွိေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနတဲ့လူတိုင္း ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ခုနစ္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အေၾကာင္းကို DVBက သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္က Documentary အေနနဲ႔ရိုက္ကူးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ့ ဖိႏွိပ္မွုကို မခံနိုင္တဲ့ျမန္မာလူထုႀကီးက ရန္ကုန္လမ္းမေတြေပၚမွာထြက္ၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေပါင္းမ်ားစြာက ဒီဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။သတင္းလႊတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားတဲ့စစ္အစိုးရက ကင္မရာကိုင္ထားတဲ့ လူမွန္သမၽွကိုဖမ္းဆီးခဲ့တာေၾကာင့္ ...
IMDB: 7.9/10 2,343 votes
Folklore: The Long Pond Studio Sessions (2020) ##unicode Folklore The Long Pond Studio Sessionကတော့ Swiftiesတွေ သဘောကျနေတဲ့ Folklore Albumကို အသံသွင်းထားတဲ့ ရိုက်ကူးမှုတစ်ခုပါ။Covid ကြောင့် အသံသွင်း စတူဒီယိုတွေပိတ်ထားတော့ Taylor Swiftတစ်ယောက် Aaron Dessner Jack Antonoffတို့နဲ့အတူ သူမအိမ်စတူဒီယိုမှာဘဲ ဒီAlbumတစ်ခုလုံးကို အသံသွင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ ဇာတ်လမ်းမှာတော့ Track 17ပုဒ်လုံးကို အစဥ်လိုက်စီသီဆိုထားပြီးတော့ သူမသီချင်းတွေရေးဖို့ ဘယ်လိုအိုင်ဒီယာတွေရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ ဒီAlbumမှာပါဝင်တဲ့ သီချင်းတွေအကြောင်းကို အသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်။ဒီFolklore Albumက Grammyမှာလဲ nominatedဖြစ်ထားတာမို့ Taylor Swiftဘယ်လိုအတွေးတွေနဲ့ ဒီAlbumကိုဖန်တီးခဲ့လဲဆိုတာကို ဒီကားကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့နားလည်သွားစေမှာမို့ ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါအုံး။Taylor Swiftရဲ့ metaphor တွေကအရမ်းကိုလှပတာမို့ အမှားအယွင်းရှိသွားခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ ##zawgyi Folklore The Long Pond Studio Sessionကေတာ့ Swiftiesေတြ သေဘာက်ေနတဲ့ Folklore Albumကို အသံသြင္းထားတဲ့ ႐ိုက္ကူးမႈတစ္ခုပါ။Covid ...
IMDB: 8.8/10 866 votes
Free Burma Rangers (2020) ##unicode Free Burma Rangersကတော့ မြန်မာ Iraq Sudanတို့မှာ ကူညီထောက်ပံပေးခဲ့ကြတဲ့ စေတနာဝန်ထမ်း အဖွဲ့ Free burma Rangersရဲ့ လုပ်အားပေးကူညီမှု ဖြစ်ရပ်တွေအကြောင်းမှတ်တမ်းထင်ထားတဲ့ Documentaryတစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ David Eubankဦးဆောင်တဲ့ Eubankမိသားစုက မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတုန်းမှာ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူ စစ်ပွဲမှာဒဏ်ရာရပြည်သူတွေကို ဆေးကုသပေး အစားအစာတွေပေးပြီးထောက်ပံကူညီခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်းရင်းသားအချို့နဲ့အတူ Free Burma Rangersအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လုပ်အားပေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတိုးချဲ့ခဲ့တယ်။Eubankမိသားစုက Iraqနိုင်ငံ Mousulနိုင်ငံကိုလဲသွားရောက်ခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲတွင်း ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကူညီပေးခဲ့ကြတယ်။ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး အန္တရာယ်ကြားမှာ ပြည်သူတွေကို ကယ်တင်ပေးတဲ့ Dave Eubankဦးဆောင်တဲ့ Eubank မိသားစုအကြောင်းကို မှတ်တမ်းထင်ထားတဲ့ Flimတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi Free Burma Rangersကေတာ့ ​ျမန္မာ Iraq Sudanတို႔မွာ ကူညီေထာက္ပံေပးခဲ့ၾကတဲ့ ေစတနာဝန္ထမ္း အဖြဲ႕ Free burma Rangersရဲ႕ လုပ္အားေပးကူညီမႈ ျဖစ္ရပ္ေတြအေၾကာင္းမွတ္တမ္းထင္ထားတဲ့ Documentaryတစ္ခုဘဲျဖစ္ပါတယ္။ David Eubankဦးေဆာင္တဲ့ Eubankမိသားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတုန္းမွာ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔အတူ စစ္ပြဲမွာဒဏ္ရာရျပည္သူေတြကို ေဆးကုသေပး အစားအစာေတြေပးၿပီးေထာက္ပံကူညီခဲ့ၾကပါတယ္။တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕နဲ႔အတူ Free Burma ...
IMDB: 9.1/10 92 votes
Bigflo & Oli: Hip Hop Frenzy ဒီတစ်ခုကတော့ ရုပ်ရှင်မဟုတ်ပဲ Music documentary လေးတစ်ခုပါ Hip Hop ကြိုက်တဲ့သူတွေသိကောင်းသိမယ့် Bigflo နဲ့ Oli ဆိုတဲ့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ပြင်သစ်rapper ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ သူတို့နယ်လှည့်ဖျော်ဖြေပွဲတွေ လုပ်ခဲ့တုန်းက ရုပ်သံမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုပါ show ပွဲတစ်ခုအတွက် နောက်ကွယ်မှာ သူတို့ဘယ်လိုပင်ပင်ပန်းပန်း ပြင်ဆင်ကြရတယ် ဘယ်လိုအစီအစဥ္ တွေဆွဲကြတယ်ဆိုတာပါဝင်ပါတယ် စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတဲ့ကြားက သူတို့တက်ညီလက်ညီနဲ့ ပွဲ တိုင်းကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့တာတွေ ပရိတ်သတ်ကို အားတက်သရော ဖျော်ဖြေပုံတွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဖေးမပြီး အတူတူကြိုးစားကြတဲ့ သူတို့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရတာလဲ အားကျစရာပါပဲ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်ရင် နာမည်ကျော်တွေရဲ့ဘဝက သာယာဖြောင့်ဖြူးပြီးအားကျစရာဆိုပေမဲ့ သူတို့မှာလည်း သူတို့အတိုင်းအတာ နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိပါတယ် ကျော်ကြားမှု အရမ်းကြီးမားတာရဲ့ အခက်အခဲတွေ မွန်းကျပ်မှုတွေအကြောင်း ပြောပြထားတာလည်းပါဝင်ပါတယ် သူတို့ကို ချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့တော့ သိမ်းထားသင့်တဲ့ Documentary လေးတစ်ခုပါ
Messi Messi(2015)အညွှန်း **************** ကျွန်တော်တို့ ဘောလုံးချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်အကုန်လုံး သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်..”ဒီလူတွေက တခြားဂြိုလ်ကကွ.နှိုင်းယဉ်မနေနဲ့” တစ်ခါတစ်လေတွေးမိကြတယ်..ဒီလူတွေဘောလုံးကန်တဲ့ခတ်ကိုမီှတာ ကံထူးလေစွဆိုပြီးတော့ပေါ… သိတဲ့ အတိုင်း မက်ဆီပါပဲ…အရပ်ခပ်ပုပု လူကောင်သေးသေးညှက်ညှက်နဲ့ ၆ပေဝန်းကျင် လူကောင်ကြီးတွေကြားထဲမှာ ဆံပင်လေးတွေနဲ့အတူ ယိမ်းရင်း ဘယ်ခြောက်ထောက်နဲ့ ဂိုးပိုက်ထဲကို ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ ကန်သွင်းတတ်တဲ့သူပေါ့… ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆု ( Ballon d’Or) ဆုကို အများဆုံးနဲ့ ခြောက်ကြိမ်အထိ ရရှိထားတဲ့ ဘာစီလိုနာရဲ့ ဂန္တဝင်ကစားသမားကြီး လီယွန်နယ်မက်ဆီရဲ့ ဟိုး ကလေးဘဝကနေ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်အထိ… ငယ်ဘဝအခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုဖြတ်သန်းပုံတွေ ..သူ့ရဲ့ပါရမီတွေ..ဘာစီလိုနာရဲ့ အရေးပါတဲ့ဂိုးတွေကို တဒိုင်းဒိုင်းသွင်းပုံတွေ အယိမ်းအနွဲ့ပေါင်းများစွာနဲ့ ပြိုင်ဘက်လုတဲ့ဘောလုံးသမားတွေကိုအရူးလုပ်ခဲ့ပုံတွေက အစ ရိုက်ကူးပြထားတာပါ… ဘောလုံးဝါသနာရှင်တွေတင်မကပဲ အားကစားကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေပါ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ တကယ့် ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးမို့ ကြည့်ရှုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ,,,
IMDB: 7.3/10 3,570 votes
BLACKPINK: Light Up the Sky ဒီတစ်ခါတော့ BLINKS တွေအတွက်လာပါပြီ !! တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ကမ္ဘာတစ်ဝန်းနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ Blackpink အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ငယ်ဘဝအကြောင်းတွေ ဒီလိုနာမည်ကြီးလာအောင် ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေ Trainee ဘဝက ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Tour အတွေ့အကြုံတွေကို တစ်ဦးချင်းစီက အသေးစိတ်ပြောပြထားတဲ့ Documentary လေးပါ…
Boeing 777: The Heavy Check ကလေးဘ၀တုန်းက လေယာဉ်မြင်တိုင်း ကောင်းကင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီး ” ဟော ဟိုမှာလေယာဉ်ကြီး”ဆိုပြီး ရယ်မောပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူးပါသလား……..။ လေယာဉ်တစ်စီးဖြစ်မြောက်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး ခရီးသည်တွေ စိတ်ကျေနပ်စေတဲ့ လေယာဉ်မျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုတာက ပိုပြီးတော့တောင် မလွယ်လှပါဘူး လေယာဉ်တည်ဆောက်တဲ့ လုပ်ငန်းအပေါ်မှာ စိတ်အားထက်သန်မူတွေ ကျွမ်းကျင်မူတွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မူတွေ နည်းပညာကိုအမှီလိုက်ပြီး တိုးတတ်ကောင်းမွန်အောင် အဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်မူတွေ အသေးစိတ်ကျကျ ပြင်ဆင်မူတွေ ဒါတွေပေါင်းစပ်ပြီးမှသာ လေယာဉ်တစ်စင်းကို ဖန်တီးနိုင်မှာပါ… လေယာဉ်ကြီးကိုစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ရင်း အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆီကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားလဲဆိုတာရိုက်ကူးပြထားတာမို့ နည်းပညာစိတ်၀င်စားသူတွေအနေနဲ့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ကားကောင်းလေးပါဘဲ
Father Soldier Son (2020) Father Soldier Son (2020) ========================= ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Netflix ကထွက်ရှိထားတဲ့ Documentary ဇာတ်ကားလေးပါ။ Father Soldier Son လို့အမည်ရပါတယ်၊ Documentary တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း စကားချည်းပဲလှိမ့်ပြောနေတဲ့ပုံစံတော့ ဖြစ်နေပေမယ့်၊ ဒီကားလေးကတော့ မပျင်းရပါဘူး မိသားစုဇာတ်အိမ်လေးပါ Brian လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသားက စစ်သားတစ်ယောက် စစ်သားဖြစ်ရတာကိုလည်း ဂုဏ်ယူနေတဲ့သူပေါ့၊သားကလေးနှစ်ယောက်ကလည်း အဖေစစ်သားဖြစ်တာ ဂုဏ်ယူတယ်၊ ခြောက်လမှတစ်ခါ တွေ့ရပေမယ့် အဖေနဲ့တွေ့ရတဲ့ရက်တိုင်းဟာ သူတို့အတွက်ရက်ရာဇာပေါ့ဗျာ။ အဖေပြန်သွားတိုင်းစိတ်ပူတယ်၊ ဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်ဖို့လည်း မျှော်လင့်ကြပေမယ့် နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှာတော့ ဒဏ်ရာရပြီးပြန်ရောက်လာတယ်။ အဲ့ကနေတစ်ဆင့် နေ့ရက်တိုင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့ သူတို့ခံစားချက်တွေ ဖြစ်စဉ်တွေကို ရိုးရိုးလေးတင်ပြထားတာပါ၊ အဖေနဲ့သားကြားက ခံစားချက်တွေကိုလည်း အင်တာဗျူးအနေနဲ့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းနောက်ပိုင်းကခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ မြှုပ်ကွက်အနေနဲ့ မပြောပြတော့ဘူးဗျာ၊ သမားရိုးကျ စစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့မိသားစုကို ရိုက်ပြထားတဲ့ Documentary ဇာတ်ကားလေးက IMDb rating 7.3 တောင် ဘာလို့ရထားလဲဆိုတာသိချင်ရင်တော့ အခုပဲကြည့်လိုက်တော့နော်
IMDB: 7.4/10 213 votes
Elephant (2020) ကျွန်တော်တို့ဟာ လူသားပီသကြသူများပီပီ တိရစ္ဆာန်တွေကိုချစ်မြတ်နိုးတတ်သလို မိသားစုဝင်တွေပမာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းမျိုးတွေလည်းပြုလုပ်တတ်ကြတယ်… ဒါပေမဲ့ တစ်ခမ်းတနားအသေးစိတ်ကအစ ရိုက်ကူးထားတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentary တွေကျတော့ကြည့်ရမှာပျင်းပါတယ်…ကြည့်ဖို့ပြင်တာသာပျင်းကြတာ ကျွန်တော်တို့ skynet မှာ documentary လေး ခဏကြည့်ရုံနဲ့ ဆက်ကြည့်ဖြစ်သွားကြတာများတယ်မဟုတ်လား… ဒါကြောင့် Elephant ဆိုတဲ့ ရှားပါး documentary လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်… လွန်ခဲ့သော လအနည်းငယ်က ဘော့ဆွာနာနိုင်ငံမှာ ကန္တာရဆင်တွေ အများအပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆင်တွေက ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်ကျတ်စား ကမ္ဘာပေါ်က‌ နောက်ဆုံးသော ဆင်တွေပါ။ ဒီဆင်တွေ အများအပြားသေဆုံးခဲ့ခြင်းဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အတော်လေးကို ထိခိုက်‌စေပါတယ်။ ဒီ Elephant ဆိုတဲ့ documentary ကားလေးက ဒီဆင်တွေရဲ့ အပြုအမူ၊ သဘာဝနဲ့ ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ ဆင်တွေနဲ့အတူ အာဖရိကရဲ့ တခြားသော တိရိစ္ဆာန်များစွာကိုလည်း ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပြီး ဆာဖာရီဥယျာဉ်ကို အလည်သွားသလို ခံစားရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေတံခွန်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဝီတိုရိယရေတံခွန်ကြီးရဲ့ အလှကိုလည်း ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားကို Disney ရဲ့ Disneynature ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ၁၅ ခုမြောက် ...
IMDB: 7.0/10 1,499 votes
Ghost Ship (2019) ကိုရီးယား မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကောင်း တစ်ခု တင်ပေးထားပါတယ်။ အစိုးရကို မျက်စိလှည့်စားတဲ့ တရုတ်နည်းပညာသမားတစ်ယောက်ရဲ့ သင်္ဘောတည်နေရာ အတုတွေ ဖန်တီးမှုကို လိုက်စုံစမ်းတဲ့ အကြောင်းပါ။ ဒီသဘောင်္တွေကို တစ္ဆေသဘောင်္လို့ ခေါ်ရတာက GPS မှာ ပေါ်နေပေမယ့် တကယ့် နေရာမှာ ရှာရင် မရှိလို့ပါပဲ။ တစ်ရက်မှာ ကိုရီးယားက အပျော်စီး သဘောင်္တစ်စီး နစ်မြှပ်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီအချက်အလက်တွေ ပေါ်ပေါက်လာပုံကို တင်ဆက်ထားတာပါ။ ဗဟုသုတ နဲ့ နည်းပညာအတွက် အကျိုးရှိလို့ တင်ပေးထားလိုက်ပါတယ်
Ghost Ship (2019)
Van Gogh: Painted with Words ဒီ Documentaryမွာ Beneditch Cumberbatch ဟာ သ႐ုပ္ေဆာင္ အႏုပညာမွာ အေတာ္ေမွာ္ဝင္တဲ့လူလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေတြးမိခဲ့တယ္။ [Unicode] သူ သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို သူနဲ့ ထပ်မျှ ကျအောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူပါပဲ။ ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုး( ဝါ ) သမိုင်းရဲ့ နာမည်အကျော်ဆုံး Impressionism ပန်းချီဆရာ အရူးတစ်ယောက် အကြောင်းကို သူ့ညီဆီ ရေးခဲ့တဲ့စာတွေ အချက်အလက်တွေနဲ့ အဖြစ်အမှန်အတိုင်း တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ Documentary ပါ။ ပန်းချီပုံတွေလည်း အများကြီး ပါမှာ ဖြစ်လို့ ပန်းချီကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ကားပါပဲ။ Loving Vincent မှာ ဗန်ဂိုးနေရာကနေ စာနာ ခံစားပြီးကြပြီဆိုတော့ အဖြစ်မှန်တွေကို ဒီကားမှာ ထပ်ခံစားကြရမှာပါ။ အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာတိုင်းရဲ့ တန်ဖိုးက မသေးခဲ့ပါဘူး ဗန်ဂိုးရဲ့ နာမည်ကျော်မှုအတွက် ပေးခဲ့ရတဲ့ တန်ဖိုးဟာလည်း မသေးခဲ့ပါဘူး။ Imdb rating မြင့်မှ ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေအတွက်လည်း rating 8.1 ရထားတဲ့ ကားပါပဲ။ ဆယ်နှစ်တာ ပန်းချီဆွဲတဲ့ ကာလလေးနဲ့ သမိုင်းမှာ ဘာကြောင့် မှတ်ကျောက်ထင်သွားလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ပဲ စီးမျောကြည့်ကြပါ။ [zawgyi] သူ သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ ဇာတ္႐ုပ္တိုင္းကို သူနဲ႔ ထပ္မွၽ က်ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့လူပါပဲ။ ဗင္းဆင့္ဗန္ဂိုး( ဝါ ) သမိုင္းရဲ႕ နာမည္အေက်ာ္ဆုံး Impressionism ပန္းခ်ီဆရာ ...
IMDB: 8.0/10 1,912 votes